Aphi amabali e-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Aphi amabali e-Instagram
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 1037
Amabali e-Instagram namhlanje yenye yezona zinto zidume kakhulu ze-instagram phakathi kwabasebenzisi bayo. Phakathi kokuhlaziywa rhoqo kwe-instagram, amabali e-instagram awona asetyenziswa kakhulu. Lo msebenzi ngaphakathi kweqonga, ofumaneka ngaphezulu kweminyaka emibini. Ivumela abasebenzisi benethiwekhi yoluntu ukuba babelane ngeevidiyo kunye nemifanekiso eya kubakho kwabanye abantu kwiiyure ze-24.
Nangona i-instagram yenzelwe umsebenzisi. Inyani yile yokuba uninzi lwabasebenzisi abatsha abayiqondi indlela esebenza ngayo. Emva koko siza kukubonisa ukuba yintoni kwaye yintoni aphi amabali e-instagram.
Athini amabali e-Instagram?
Amabali e-Instagram, amabali e-instagram okanye "amabali" ngokulula yimixholo yomsindo enokuthunyelwa ngumsebenzisi kwindawo ethile yeqonga le-instagram. Umxholo oposwe ngumsebenzisi unexesha elithile kuphela, ngakumbi iiyure ezingama-24. Olu sebenziso luyasebenziseka kumthengi. Umbono ovela koku kusebenza uvela engqondweni yomnini we-Facebook (nakwi-Instagram). Oku kwenzelwe ukukhuphisana nolunye usetyenziso oludumileyo olubizwa ngokuba yi-Snapchat.
Zombini ukusebenza kweSnapchat kunye namabali e-instagram afana kakhulu. Umahluko kuphela kwinto yokuba uhlaziyo lwe-instagram kulo msebenzi. Ukuze umsebenzisi azi aphi amabali e-instagram, ezi ke zikukuqala.
Phakathi kokutshintshwa okutsha okunikwe amabali e-instagram, kukugcinwa kweefoto kunye nevidiyo. Kwakhona, iimpapasho ozenzayo emabali ngoku zigcinwa ngokuzenzekelayo.
Uyilo olulula lwe-instagram lwazisa aphi amabali e-instagram. Ngapha koko unesikhokelo:
Aphi amabali e-instagram abo ubalandelayo
Ukufumana amaBali abantu obalandelayo kulula kakhulu. Into ekufuneka uyenzile yile ilandelayo:
Yiya kwiphepha lasekhaya okanye lasekhaya kwi-app nakwikhompyuter.
Ngasentla kwethebhu kuya kubakho iibubble ezinemifanekiso yeeprofayili zabantu obalandeleyo.
Ungacinezela nayiphi na iibubble kwaye ibali lomsebenzisi oyikhethileyo liya kuvela ngokukhawuleza.
Ukuqhubeka nokubukela amabali ungacofa ukuze uqhubeke nokuhlaziya nganye yazo.
Ngaphakathi kwi-instagram, amabali adlala ngokuzenzekelayo, ngoko akukho mfuneko yokuba ucofe kwiscreen ukuba awufuni.
Aphi amabali akho e-Instagram
Ukufumana amabali akho e-Instagram kufuneka wenze oku kulandelayo:
Ngaphezulu kwesikrini, kwikhonkco elifanayo apho avela khona amabali abantu owalandelayo. Kuya kuvela bubble kunye nomfanekiso weprofayile yakho.
Ukuba sele upapashe ibali kufuneka ucofe i-bubble ngesithombe sakho kwaye ibali lakho liya kudlalwa.
Enye indlela yokufumana amabali akho e-Instagram kukungena kwiprofayili yakho. Ukucinezela kumfanekiso wakho weprofayile.
Asebenza njani amabali?
Amabali e-Instagram ngokuchasene nezithuba eziqhelekileyo ezenziwe kwi-instagram. Zilungiselelwe ukuba zihlale ixesha elithile, kwi-instagram malunga neeyure ezingama-24 ukusukela ngala mhla kupapashwa ngawo. Nje ukuba iiyure ezingama-24 zikhuphuke amabali ayanyamalala ngokuzenzekelayo. Ekuqaleni, xa eli nqaku litsha laziswa kwi-instagram, iiposti zazingagcinwanga. Phakathi kweenguqulelo ezintsha kukuba amabali asapapashiweyo agcinwa eqongeni.
Ukusuka kwiiNdaba ze-instagram unokwenza ii-albhamu kwaye ungeze umxholo kumabali akho kwii-albhamu esele zenziwe. Ezi ziya kufumaneka kwiprofayile yakho ye-instagram engezantsi kwenkcazo yakho.
Uyipapasha njani ibali
Ukupapasha ibali, into yokuqala ekufuneka uyazi aphi amabali e-instagram. Nje ukuba uyazi oku, unokwenza oku kulandelayo:
Ngena kwiakhawunti yakho yobuqu okanye eyamashishini.
Isinyathelo esilandelayo siqulathe ukwazi apho amabali e-Instagram kwaye engena khona. Zimbini iindawo apho unokupapasha ibali. Ezi zezi:
Kwi-bubble kunye nomfanekiso wakho weprofayili ubekwe phezulu ekuqaleni kwe-instagram. Ukuba awukwenzi naluphi na ushicilelo kumbindi, uphawu + oluya kubonakala. Olu khetho lunokusetyenziswa kuphela ukuba awukwenzi ushicilelo ngaphambili.
Olunye ukhetho kukungena kwiprofayile yakho kunye nokucofa uphawu + olubekwe kumfanekiso weprofayile yakho.
Olunye ukhetho olutsha ngaphakathi kwamabali e-Instagram kukuba ukongeza umxholo webali kwii-albhamu. Onokuyidala.
Ukufikelela kumabali agcinwe kwii-albhamu kuya kufuneka ufake iprofayile yakho kwaye ngezantsi kwenkcazo yakho uya kuzifumana.
NjengoSnapchat. Amabali e-Instagram anoluhlu lweefilitha ezifumanekayo kumsebenzisi. Inemifanekiso kunye nokusebenza kwayo. Ezinye zezinto onokongeza kuzo kumabali e-Instagram yile:
Iifilitha ezahlukeneyo, ukusuka kweyona nto imnyama kunye emhlophe ukuya kwezinye ezisebenzayo kunye notshintsho lwelizwi.
Imisebenzi eyahlukeneyo enje nge: Superzoom, Boomerang kunye neRewind.
Ukusuka kwi-instagram ngoku kunokwenzeka ukwenza ividiyo.
Beka isicatshulwa kwiifoto zakho okanye iividiyo.
Unokubeka izitikha kunye neminye imizekeliso. Oku kwahluka ngemihla ekhethekileyo, nangona ezinye zifumaneka ngalo lonke ixesha.
Ngoku ungathumela namabali kwinani elithile labantu okanye kumntu omnye ovela kwi-instagram ngqo.
Ngubani obona amabali am e-Instagram?
Omnye umbuzo obuzwe ngabo bonke abasebenzisi abatsha be-instagram kunye aphi amabali e-instagram Ngubani obona amabali am e-Instagram? Impendulo yalo mbuzo inokuhluka. Siza kukucacisela apha ngezantsi. Zimbini iintlobo zabasebenzisi kwi-instagram, eyokuqala yile ene-akhawunti kawonkewonke kwaye eyesibini yileyo ine-akhawunti yabucala.
Xa umsebenzisi ene-akhawunti kawonkewonke, nawuphi na omnye umsebenzisi we-Instagram angabona amabali abawalayishayo. Kwelinye icala, xa umsebenzisi ene-akhawunti yabucala, kuphela ngabalandeli bakhe abanokubona amabali akhe. Kungenxa yokuba amabali e-instagram asebenza ngendlela efanayo neempapasho eziqhelekileyo, ngokubhekiselele kwimimandla yabucala bayaphathwa.
Ke sukukhathazeka xa une-akhawunti yabucala. Kwimeko apho awufuni ukuba wonke umntu abone amabali akho, konke ekufuneka uyenzile kukubeka i-akhawunti yakho njengeyimfihlo. Olunye ukhetho kukuhambisa ibali kwiqela labantu. Le yokugqibela inomda kuba ngokomgaqo-nkqubo weprofayile othe ngqo, elona nani liphezulu labantu onokuthumela umyalezo livela kwi15. Ke, ukuba ufuna ukuthumela ibali kubantu abangaphezu kwe-15 kuya kunyanzeleka ukuba uthumele umyalezo izihlandlo ezininzi.
Agcinwa njani amabali e-Instagram?
Ngoku ukusuka kwi-Instagram unokugcina amabali. Olunye lohlaziyo olutsha olwenziwe kwi-intanethi kwiqonga laso kukusindisa amabali ngokuzenzekelayo xa sele lungafumaneki. Ukugcina izithuba ngaphakathi kwi-instagram kufumaneka ixesha elide. Nangona ngaphambili ibinokwenziwa kuphela ngokushicilelwa okuqhelekileyo. Ngokungafaniyo nokupapashwa okuqhelekileyo. Phakathi kohlaziyo lweqonga elitsha, amabali aya ngqo kugcino.
Uza kuwafumana njani amabali agcinwe?
Ukwazi aphi amabali e-instagram Ubhale ntoni? Kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Ngena kwi-akhawunti yakho yabucala okanye yequmrhu. Ungakwenza oku ngokufaka zombini usetyenziso kunye nekhompyuter.
Ngenisa iprofayile yakho. Oku kwenziwa ngokunqakraza kwi icon yefayile.
Cofa kwi icon yewotshi kwikona ephezulu ngasekunene kwizixhobo ze-Android nakwicala lasekhohlo lezixhobo ze-iPhone.
Nje ukuba ucofe i icon, zombini ezigciniweyo ezigciniweyo kunye nezithuba eziqhelekileyo ziya kuvela.
Albums zamabali akho
Ukwenza ii-albhamu yenye yohlaziyo olutsha kumabali e-instagram. Okwethutyana ngoku, abasebenzisi banokuwafumana amabali abawapapashayo kwii-albhamu ezahlukeneyo abanokuthi bazinike igama. Lo msebenzi uvumela umsebenzisi ukuba abelane nabalandeli bakhe ngamaxesha athile opapasho. Xa i-albhamu yenziwe kwi-instagram, umsebenzisi anokongeza amabali awafakayo.
Ukwenza ii-albhamu kuvumela umsebenzisi ukuba asindise amaxesha athile kwaye aqhubeke ajonge abalandeli bawo. Ngokungafaniyo naMabali aqhelekileyo, ezo zigcinwe kwii-albhamu zihlala zibonakala kubalandeli. Iyakwazi ukwahlulahlula nokugcina iifoto. Kuba ii-albhamu ziyabonakala kubalandeli.
Ukwazi aphi amabali e-instagram ukugcinwa kwii-albhamu kufuneka ungene kwiprofayile yakho ye-instagram. Emva kwexesha uza kufumana i-albhamu engezantsi kwenkcazo yeprofayili.
1 Athini amabali e-Instagram?
1.1 Aphi amabali e-instagram abo ubalandelayo
1.2 Aphi amabali akho e-Instagram
2 Asebenza njani amabali?
3 Uyipapasha njani ibali
4 Izinto zeBali
5 Ngubani obona amabali am e-Instagram?
6 Agcinwa njani amabali e-Instagram?
7 Uza kuwafumana njani amabali agcinwe?
7.1 1 nyathelo
7.2 2 nyathelo
7.3 3 nyathelo
7.4 4 inxenye
8 Albums zamabali akho
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nendlela yokwenza iphepha
Ngaba uyayazi indlela yokudlala i-solitaire? Sikubonisa yonke into